DED Liberia - waxa aad sameyn karto marka aad DED dhacayo?
Warbixin ku saabsan DED dadka ka Liberia
ardayga dugsiga sare Gabrielle Gworlekaju, xaq u, la hooyadeed, DED xajiya Magdelene Menyongaro, guriga ee Minneapolis. Sawir by Jared Goyette, iyadoo Guardian.
DED Liberia - marka ma DED aan dhacayo?
DED Liberia - Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in Dib Departure khasabka ah (DED) dadka ka Liberia ayaa lagu kordhiyay ilaa March 30, 2020. To find out more, Waad awoodaa:
akhri Federal Register Notice about work authorization
Haddii aad tahay qof haysta DED ka Liberia, aad ilaalinta dhammaan doontaa taariikhdan.
Waxaad u baahan doontaa in aad bedesho xaaladdaada ama ka tago Maraykanka by March 30, 2020. Haddii aadan waxba sameyn, waxaad halis ugu qabtay iyo masaafurinta.
Weli waxaan ka shaqayn kartaa?
ayaa si joogto ah daganaa ee dalka Mareykanka tan iyo October. 1, 2002, iyo
waa faa'iidaya hadda hoos DED for Liberia.
Ma u baahanahay EAD cusub?
EADs with an expiration date of March 31, 2019 are automatically extended for 180 days until Sept. 27, 2019. USCIS is accepting applications for work authorization through March 30, 2020. Haddii aad weli xaq u leedahay shaqada oggolaansho laakiin Document Oggolaanshaha Shaqada (EAD) has expired or is due to expire, Waa in aad gudbiso cusboonaysiin.
You may request work authorization by filing a Foomka I-765, Codsiga Shaqaaleynta. You can find more details on the USCIS DED information page.
Maxaa ku saabsan cidda aan u shaqeeyo?
Waxaad muujin kartaa warqada shaqada dhacay oo nuqul ka mid ah Register Federaalka ogaysiis loo shaqeeyayaasha ama saraakiisha dowladda. Loo-shaqeeyayaasha tiirsan waxaa laga yaabaa in ee ku taal ogeysiiska Register Federaalka caddayn in EAD weli aan dhicin.
Haddii shaqo-aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan kordhinta EAD automatic, waxay la xiriiri karaan:
USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 ama
xoreeyo. Department of Justice, Immigrant iyo Xuquuqda Shaqaalaha Section (IER) Hotline Shaqeeyaha: 800-255-8155
Haddii aad qabtid su'aalo ama walaac ku saabsan naftaada kordhin EAD ah, wac Xafiiska Hotline Golaha Shaqaalaha Gaarka ah 800-255-7688.
Maxaa dhacaya haddii aan doonayo in aan u safro?
Haddii aad rabto in ay u safraan meel ka baxsan Mareykanka oo ka hor taariikhda uu dhacayo soo laabto, Waa in aad gudbiso sharafeed ka hor. Horumariyo sii-daynta sharafeed waxaad siineysaa ruqsad aad ku tago Maraykanka oo ku soo celi inta lagu guda jiro muddo la cayimay. Si aad u codsato-daynta sharafeed ka hor, waa in aad soo gudbiso Foomka I-131, Codsiga Document Travel.
Maxaa dhacaya marka DED Liberia dhacayo?
Marka DED dhacayo, aad sharci ku laaban doonaa waxa ay hore u ahayd. You can apply to change your status or you can leave the USA.
"12-Bishan muddo KMG DED ogolaanaya shaqsiyaadka saameysey si loogu diyaariyo in ay ka Mareykanka ka tagay, ama doondoonaan xaaladda kale xalaal socdaalka ee dalka Mareykanka, haddii xaq u, ka hor inta DED dhamaado on March 31, 2019."
Waa in aad xaq u leedahay inaad codsato. Waxaad codsan kartaa kaarka cagaaran, haddii aad si sharci ah ku soo gashay iyo buuxiyaan shuruudaha kale. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah qoyskaaga ama shaqadaada. Aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay iyo sida loo dalbato jinsiyadda.
Qaar ka mid ah dadka haysta DED laga yaabaa in ay ku joogto dalka Mareykanka ku hoos fiisooyinka gaar ah. Waxaa jira fiisooyin loogu talagalay dhibanayaasha ka ganacsiga dadka, xaaska Xadgubo, carruurta ama waalidiinta iyo dhibanayaasha dembiyada kale.
Sida loola xidhiidho safaarada Liberia ee dalka Mareykanka
Waxaad ka heli kartaa website aad ee dalka Maraykanka safaarada halkan. Safaaradda dhejin doonaa updates ku saabsan DED on page guriga ay.
Cinwaanka safaarada waa 5201 16th Street N.W., Washington DC 20011.
lambarka taleefanka waa: (202) 723-0437.
Waa TPS ama dhacayo DED?